Andapa Lehilahy telo indray no tratra nangalatra lavanila maitso
Voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny kaomisaria Andapa omaly 19 marsa ireo telolahy mpangalatra lavanila maintso. L
ehilahy iray nitondra lavanilay halatra 8 kilao sy sasany no tra-tehaky ny polisy tany an-toerana, omaly. Fantatra fa lavanila avy nangalarina tany amin'ny kaominina ambanivohitra Belombo Lokoho ireto lavanila ireto ary nokasain'ity lehilahy ity hamidy tao Andapa ka izao tratra izao. Rehefa natao famotorona ity lehilahy ity dia nilaza fa efa misy mpandray ireo lavanila ireo. Natoron'ity lehilahy ity ny Ppolisy ny tranon'io mpividy io. Nanao ny fokarohana avy hatrany ny polisy ka tra-tehaka tao an-tranony io lehilahy mpividy io ary mbola nahitana lavanila maintso milanja 11 kilao sy sasany tao aminy miaraka amin'ny fitaovam-pandanjana (mizana) miisa 02. Mbola nitohy ny famotorana nataon'ny polisy tamin'ilay lehilahy voasambotra voalahony ary mbola nanondro lehilahy iray hafa indray izy izay lazaina fa mpiara-miasa aminy amin'ny fangalarana ireo lavanila maintso ireo.